Ukubulela ebesoloko iholide zemveli kakhulu ajikelezayo intsapho, ikarikuni, kanye football. kunjalo, abo phakathi kwenu abakonwabelayo ukuhamba kwaye banokusebenzisa indlela ekhawulezileyo yokubaleka kufuneka bacinge ngokuchitha ixesha leeholide lonyaka kwenye yezi zixeko zibalaseleyo zokundwendwela umbulelo eYurophu.
EYurophu idla zisilele kunye nabakhenkethi, kodwa enye ngeke sithethe okufanayo ekupheleni uNovemba. Kungenxa yoko le nxalenye yonyaka lixesha elifanelekileyo lokutyelela izixeko zakudala kwaye uphinde wenze izithethe zombulelo ngokutya okumnandi kunye nemibala emangazayo yokuwa.
Abo kuni ingqalelo ukutya ukuba abe yinxalenye ebalulekileyo ye Thanksgiving, Uya kuba nesabelo esifanelekileyo eLondon. Le ndawo ukutya apha ayiphucukanga yaye bahlukahlukene emva enye kwizixeko ezinkulu lithi. Kuya kubakho into kukhetho wonke.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye itekisi asinike nje ngetyala ngekhonkco kule post blog, okanye cofa apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-cities-visit-thanksgiving-europe%2F%3Flang%3Dxh - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)